Caarada carbide indha indheynta induction ee qalabka ilkaha madaxa birta.
qulqulka sare ee xarigga carbide kuleylka kuleylka ee geedka madaxa birta
Imtixaankan arjiga ah, caarada carbide indha indheynta induction ee birta ilkaha madaxa ka shaqeeya.
Qalabka Indhaha Indhaha
DW-UHF-10kw Mashiinka brazing induction
Qalabka kuleylka kuleylka ee kuleylka ah
• Bir ilkaha madaxa shaqeeya
• Jinka isku dhejiya
Awooda: 4.5 kW
Waqtiga: 6 sekan
Jinka dhejisyada ayaa lagu dhejiyaa qalabka
Ilkaha madaxa shaqeeya ee birta ah ayaa ku lifaaqan.
Kulanku wuxuu kuyaalayaa salka saddexda-leexasho.
Golaha ayaa kululaanaya.
Wadajirku wuxuu ku dhammaadaa 6 ilbidhiqsi.
Xaglaha adag ee adag
Xulo doorasho oo sax ah oo cad, taasoo keentay in qayb yar oo dib-u-
Xilliyada kuleylka kuleylka
Natiijooyin isdaba joog ah oo ku habboon iyo ku habboonaanta wax soo saarka mug weyn
Ka badbaado badan dab la gubo
Induction Brazing Carbide Tabaha waa nidaam geedi socod gaar ah oo shey adag oo adag la mariyo walxaha aasaasiga ah si loo soo saaro gees goyn aad u adag. Markaad isticmaaleyso kuleylka kuleylka, sheyga guntinta waxaa lagu xiraa qalabka salka leh heerkulka illaa 1900F.
Categories Technologies Tags xarkaha birta carbide, caarada carbide, caarada carbide birta ah, HF carzing carbide tip, HF carbide bir ah, Xilliga Sare, caarada carbide ee soo noqnoqda, carbide induction brazing induction, Indho-indheynta xarkaha carbide, tuubbo dhagxis ah, Indha-indheynta birta birta Post navigation